I-China 2 Way Silicone Foley Catheter kunye neTiemann Tip mveliso kunye nabenzi | Kangyuan
Indlela ye-2 ye-Silicone Foley Catheter ene-Tiemann Tip eneBhaluni eqhelekileyo okanye i-Integral Balloon Unibal Uhlobo lweBhaluni yamadoda aBantwana naBantu aBadala
• Yenziwe nge-100% yamayeza abicah angaphandle.
Le mveliso yeyeklasi IIB.
• Ibhaluni ethambileyo nefane ngokufanayo yenza ityhubhu ukuba ihlale kakuhle ngokuchasene nesinyi.
• Umbala-wekhowudi yevalve yokujonga ubungakanani obahlukeneyo.
• Uyilo olukhethekileyo lwencam, olulungele indoda, ukunciphisa iintlungu.
• Ubude: 410mm ± 5mm.
Ukupakisha: Iifayile ezili-10 / ibhokisi, ii-200 iiPC / ibhokisi
Ubungakanani beCarton: 52x34x25 cm
"I-KANGYUAN" i-Urinary Catheters yoSetyenziso oluNye (i-Foley) yenziwe ngerabha yesilicon engeniswe kwitekhnoloji ephezulu. Imveliso inomphezulu ogudileyo, ukhuthazo oluncinci, umthamo omkhulu we-apocenosis, ibhaluni ethembekileyo, ekulungeleyo ukuyisebenzisa ngokukhuselekileyo, iintlobo ezininzi kunye nokubalulwa kukhetho.
Imveliso inokusetyenziswa eklinikhi ukucoca kunye nokukhupha isinyi ngokufaka kwi-urinary bladder nangona i-urethra.
1. ukuthambisa ajikeleze: Thambisa ngobunono incam kunye neshafti yetyhubhu ngaphambi kokufakwa.
2. Faka: Ngenisa ngononophelo incam ye-catheter kwisinyi (ngesiqhelo ibonakaliswe kukuhamba komchamo), emva koko uphinde u-3cm uqinisekise ukuba ibhaluni nayo ingaphakathi kuyo.
3. Ukungenisa amanzi: Sebenzisa isirinji ngaphandle kwenaliti, galela ibhaluni ngamanzi angenazintsholongwane okanye i-5%, isisombululo se-10% se-glycerin aqueous sinikezelwa. Umthamo ocetyiswayo ukuba usetyenziswe uphawulwe kwifanele ye-catheter.
4. Ukumbiwa: Ukuhla kwexabiso, kunqumle ifanele yokunyuka kwamaxabiso ngaphezulu kwesivalo, okanye usebenzise isirinji ngaphandle kwenaliti yokutyhala kwivelufa ukulungiselela ukuhambisa amanzi.
5. Ipetrathi yokuhlala: ixesha lokuhlala liyimfuno yeklinikhi kunye nomongikazi.
Imeko engafanelekanga ethathelwa ingqalelo ngugqirha.
1. Sukusebenzisa amafutha okanye izinto zokuthambisa ezinesiseko sepetroleum.
2. Ukucaciswa okwahlukileyo kwe-catheter ye-urethral kufuneka kukhethwe njengamaxesha ahlukeneyo ngaphambi kokusetyenziswa.
3. Le mveliso iye yacocwa ngegesi ye-ethylene oxide, yaza yalahlwa emva kokusetyenziswa kube kanye.
4. Ukuba ukupakisha kumoshakele, sukusebenzisa.
5. Ubungakanani kunye nomthamo webhaluni uphawulwe kwipakethe yeyunithi yangaphandle kunye nefaneli yekhathetha.
6. Ucingo lwesikhokelo se-intubation encedisayo kumjelo wokuhambisa amanzi wecatheter lubekwe kuqala ebantwaneni.
7. Ekusetyenzisweni, njengokufunyanwa kwe-catheter yomchamo, ukongezwa okungaphezulu komchamo, ukungabikho komjelo owaneleyo, ukutshintshwa kwe-catheter kufuneka kube yimigaqo esebenzayo ngexesha elifanelekileyo.
8. Le mveliso kufuneka iqhutywe ngabasebenzi bezonyango.
9. Ixesha lokuhlala licebisa ukuba kungabikho ngaphezulu kweentsuku ezingama-28.
Inaliti yamanzi angenazintsholongwane ayizukugqitha umthamo wecatheter (ml).
Egqithileyo Abicah Foley Catheter ngoPhononongo lobushushu
Okulandelayo: 2 Indlela ye-Silicone Foley Catheter
I-tiemann yanciphisa i-catheter ye-foley
I-tiemann yanciphisa i-catheter ye-urethral
I-tiemann yanciphisa i-catheter yomchamo
Ezilahlwayo Endotracheal Tube Kit
Ityhubhu yesisu sePVC